Deg Deg: Mareykanka oo qabtay rag qarxin rabay Soomaali dagan mareykanka gudahiis iyo masaajid weyn - iftineducation.com
iftineducation.com – Dalka Mareykanka, saddex nin ayaa la soo taacay maxkamad, iyaga oo lagu eedeeyay in ay doonayeen in ay qarxiyaan dhismo ay deggan yihiin dad Soomaali ah iyo Masjid ku yaala gobolka Kansas ee dalkaasi.
Raggan oo kala ah Curtis Allen oo 49 jir ah, Gavin Wright oo 49 jir ah, iyo Patrick Eugene Stein oo 47 jir ah ayaa hub iyo walxaha qarxa u diyaarsaday weerarkaasi, sida ay sheegtay waaxda caddaaladda mareykanka.
Labadan nin ayaa ka mid ahaa ragga doonayay in ay qarxiyaan dhismaha Soomaalidu deggan tahay ee Mareykanka.
Saddexdani nin oo xubno ka ah koox maleeshiyo ah oo lagu magacaabo Crusaders ayaa sidoo kale waxa ay bartilmaameedsanayeen goob lagu magacaabo Garden City.
Raggan ayaa las heegay in ay doonayeen in ay weerarkaasi fuliyaan sagaalka bisha Nofembar, oo ku beegan maalin uun kaddib doorashada mareykanka.
Dacwad oogeyaasha dalkaasi ayaa sheegay in raggani ay diyaariyeen qorshe isla markaana ay doonayeen in ay qarxiyaan dhismahaasi oo ay deganaayeen Soomaali ka mid ah 120 qof oo halkaasi deganaa.
Sida la sheegay raggani waxa ay ka wadaahdleen in ay afar baabuur oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa ay dhigaan qaybta baabuurta la dhigto ee dhismahaasi isla markaana ay halkaasi qarax ka geystaan.
Raggani ayaa haddii dambigaasi lagu helo waxa ay muteysan karaan in cimri xarig lagu xukumo, waxaana mid ka mid ah raggani uu sheegay in ay dhismahaasi bartilmaameed ka dhigteen sababo la xiriira Soomaali tiro badan oo halkaa deggan.
Arrintan ayaa sababtay in golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka uu ugu baaqo dowladda in la ilaaliyo ammaanka Masaajidda.
Markii aroosi lahaa uu diidey in uu yimaado xaflada Gabar Madoow ah oo Boombilo loo aroosiyay.